crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Wax Ka Baro GERIGA | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna December 27, 2015	0 1,256 Views
Muqdisho (Himilonews) – Nafley adduunka joogta kan ugu dheer, wuxuuna joogaa Afrika oo kaliya; wuxuu leeyahay sur aad u dheer iyo lugo iyagana dheerdheer. Dhererkiisu wuxuu gaaraa laba mitir iyo bar; waa uu daaqaa; waana calanaqsadaa.
Wuxuu leeyahay guud yar oo jilicsan oo surka kaga yaal; wax laba gees oo yaryar lamoodo oo dhegaha dhexdooda kaga yaal; harag aad u adag oo gaashaamo, kabo iyo kuwa badan laga sameeyo; qoobab qurux badan iyo midab gaashiyo badan oo googgo’an oo cawl ahi ku rogan yihiin.
Noolaha calanaqsada waa midka ugu weyn. Wuxuu katirsan yahay qoyska Giraffidae. Wuxuu ku baahsan yahay Jamhuuriyadda Jaad ee docda waqooyi ilaa Koofurta Africa iyo Neyjeeriya oo galbeed ku dhigan jeer Soomaaliya laga tago oo Bari ku dhigan. Wuxuu badi ku dhaqan yahay dhulka isla siman ee Safaanaha iyo dhulka cawska ah. Gesiinkooda doorka ah waa caleemaha geedka Akeeshaha “acacia” oo ay kor u laacdo kaas oo daaqleydu aanay gaari Karin.
Waxaa kaliya badigeed horora oo disha libaaxa; siiba Aarka. Dhasheeda waxaa iyaguna bar-disha Haramacadka, Waraabe-dhibiclaha iyo Ey-duureedka. Hal-geriyadu malahan dhumuc adag oo kulanti ah waloow ay ku kulmaan baqa-cararka iyo kolkay doc u wada yaacayaan.
Magaca “Giraffe” waxaa asalnimadiisa iska leh Afka Carabiga Zarafa. Dabcan afafka qaar ee Afrikada madow, Geriga waxaa lagu fasiray Orod-dheere. Ereygu waxaa maan-galnimadiisa laga soo dhanbalay ereyga Geri oo Soomaali ah. Gumeystihii Talyaaniga ayaa ka dhigay giraffa sanadii 1590. Hab-casriyeedkii Ingiriiska ayaa isna kasii horumariyay erey-bixintii Faransiis ee girafe sanadii 1600.
Hal-geriga dhab u koraa wuxuu dhirirkiisu gaaraa 5—6 mitir. Labkuna in-door ah ayuu ka dheer yahay dhedigga. Celcelis ahaan culeyskoodu wuxuu gaaraa 1,192 kilgaram oo labka ah iyo—828 kilogaram oo dhedigga ah. Carabkiisuna waa 50 cm oo dhirir ah. Luquntiisu waxay dheer tahay 2 mitir oo dhumuc leh.
Tiiyoo lugo iyo luqun dheere yahay, Gerigu guudkiisa xiriirsani aad uma dheera. Labadiisa indhood ee kaxda banaan ku yaalla ayaa siiyay aragti dheer iyo hirasho. Gerigu midabka ayuu wax ku arkaa. Dareenkiisa maqalnimo iyo urisnimana aad bay u sarreeyaan.
Hal-gerigu wuxuu dhaqaaqi karaa xawaare ilma-arag ah oo ku dhow 60km/h saacadii. Wuxuu dhaqaaq-joogteyn karaa in ko dhow 50km/h saacadii. Wuxuu hurdi karaa 4.6 saac 24—kii saac siiba ugu badnaan habeenkii. Sara-joog iyo sal-fadhiba wuu ku hurdi karaa.
Sidka Hal-gerigu wuxuu gaaraa 400—460 maalmood oo u dhiganta 15 bilood iyo bar. Sida aadmiga ayay mideeyaan waloow kolkol ay mataaneeyaan. Hooyadu sara-joogsi bay ku dhashaa. Lugaha hore iyo madaxa ayaa usoo horbaxa halka jeenyaha iyo mal-dheertuna ay iskasoo daba baxaan. Dhashu wuxuu dhirirkeedu gaaraa 1.8 mitir. Saacado yar kadib dhashu orodkay ku mijo-furataa.
Hal-geriyadu way ka cimri dheer yihiin noolaha calanaqsada. Celcelis ahaan waxay noolaan karaan 25 sanadood.
Xigasho –Buugga Duur-joogteenna oo uu qoray Qore Zakariya Hassan Muhumed “Hiraal.”
Previous: Wax Maka tagaan Nolosha Biciidka?! –Hadda BARO!
Next: Xaqiiqooyinka ku saabsan BAKEYLAHA
Sahan: Labiska macalinku wuxuu saameyn fiican ku leeyahay firfircoonida maskaxda ardayda
Dhageyso: Warbixin ku saabsan haweeneydii Soomaaliyeed ee hal-gamaaga aheyd